Dhaqanka Kala Duwan - Trump Eco Technology Co., Ltd.
Geomembranes Is koollo
Dhaqanka Kala Duwan
Dahaarka dhul gariirka
Mashaariicda qashin qubka
Mashaariicda gaaska batroolka
Tunnel iyo mashaariicda waddooyinka
Dhismaha & Saqafka
Mashruucyada biyo xidheenka & harada
Waxaan ku soo ururnay warshadaha 38 sano. Maxaa taageeraya horumarkeenna iyo horumarkeenna? Waa awoodda geesiga ah ee ruuxi ah iyo caqiidada iyo ku-dhaqanka hal-abuurnimada joogtada ah. Lama dafiri karo in aan haysanno qalab horumarsan iyo habab maamul, laakiin xoogga weyn ee wadista ee ay sameeyeen roobab dhaqameedka aan la arki karin ayaa ah isha guusha.
Dhanka kale, shirkad dhaqamo kala duwan leh, waxaan ogaanay in horumarka waara uu u baahan yahay u heellan muddo dheer iyo masuuliyad wadareed xagga dhinacyada dhaqaalaha, deegaanka iyo bulshada
Marka la eego sii kordheysa wasakheynta deegaanka, waxaa naga go'an horumarinta iyo hal-abuurka qalabka u habboon deegaanka. U oggolow mashaariicdu inay adeegsadaan agab ka sii wanaagsan bey'adda ama ay kordhiyaan ilaha dib loo cusboonaysiin karo.
U ogolow shaqaale kastaa inuu si xamaasad leh u shaqeeyo, jeclaado warshadeena iyo jagadeena, oo si joogto ah u cusbooneysiiyo xirfadahooda iyo aqoontooda. Qof kasta oo shaqaale ah ha noqdo khabiir ku ah booskiisa. Shaqaaluhu ha la wadaagaan miraha horumarka shirkadaha qoysaskooda iyo carruurtooda. Waxaan nahay qoys weyn.
U ogolow macaamiisha inay helaan alaab qiimo badan, shaqaaluhu ha helaan horumar ballaadhan, bulshada ha ka dhigto mid bey'adeed u fiican, oo alaab-qeybiyeyaashu ha u hagaajiyaan oo horumariyaan. Macaamiisha, shaqaalaha, alaab-qeybiyeyaasha iyo mujtamaca ayaa gacmaha isula tagaya horumar waara.
Trump Eco Technology Co., Ltd. waa shirkad weyn oo ku hawlan cilmi-baarista, soo-saarka iyo iibinta geosynthetics iyo macromolecule qalabka biyuhu xiraan.
Cinwaanka: No.32, dhismaha xafiiska dharka lagu iibiyo, Jinke Road, Degmada Jinniu, Chengdu, Shiinaha 610036